Isikhumba somuntu sibucayi kakhulu kunoma yiziphi izinguquko ezimweni zesimo sezulu. Akayikubekezelela ilanga elivuthayo, futhi ngezinye izikhathi liphendula ngesithwathwa ngendlela engavamile. Kungase kubonakale izintuthwane ezincane ezibomvu, eziqala ukugxuma, ukuvuvukala nokubomvu, ukuqala kwempumu ephuthumayo, izinyembezi ziyogeleza kakhulu. Ngokuvamile ukubandlulula okubandayo kubangela ukucabanga okukhulu kwe-bronchospastic - ukugxila okubukhali kwemikhumbi yomoya, okwenza kube nzima ukuphefumula.
Kuye kwafakazelwa ukuthi zonke izinhlobo zezifo ezingapheli zingabangela ukuqala kokushisa okubandayo: i-tonsillitis, i-cholecystitis, amazinyo aqhathanisayo, kanye nama-helminths nokusebenza komzimba we-thyroid. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwesimo saleso sifo kungazuzwa njengefa. Isibonelo, uma umuntu osesikhathini esithile ebonisa ukuphendula okweqile hhayi kuphela emakhazeni, kodwa ngisho nasothuli, izitshalo, ukudla okunye. Ngakho-ke, zama ukulungiselela kusengaphambili ngezinselele zobusika.
Into esemqoka akuyona ukubandakanyeka ekuziphatheni. Udinga usizo ludokotela we-allerergist ozonquma ukuthi uluphi uhlobo lokubandlulula olubandayo oluhluphekayo futhi oluzokwenza ukhethe ukwelashwa okwanele kwalesi sifo.
Ngomkhuhlane obandayo, udokotela uzokutusa ukwelapha ngokushesha izifo ezingapheli. Uyamangala? Ngeze! Phela, zimelela ukugxila okuqhubekayo kokutheleleka. Futhi lochwepheshe uzokunikeza izidakamizwa zokulwa nezidakamizwa ezizosusa ukuchithwa nokubomvu kwesikhumba. Lapho ukwelashwa kwalesi sifo, ukugeza okufudumele okunomsoco we-chamomile noma isitashi kuye kwaba kuhle. Baphumula futhi banciphise isikhumba esishaywa yisimo sezulu. Kodwa ungabathatha ebusuku kuphela. Futhi ngemva kwezinqubo zamanzi, sebenzisa njalo isikhumba esikhumbeni sakho. Ngakho uzolungisa umphumela wokuphulukisa.
Uma ufuna ukuthola ukuthi uthinteka yini ngesimo sezulu esibuhlungu, ungenza inqubo yokuhlola elula. Thatha ingqamuzana eqhweni kusuka efrijini bese unamathisela imizuzu engu-10-15 kuya ngaphakathi kwe-forearm noma esihlalweni, bese uphendula imibuzo.
Ingabe isikhumba sibomvu noma simhlophe?
Indawo ofaka kuyo i-ice kuyinto enhle, inhlanhla?
Uke waba ne-rash noma i-blister?
Ngisho nenye impendulo enhle ithi unomzwelo okhulayo wesikhumba kubanda. Ngakho, ngaphandle kokubonisana ne-allergenist, awukwazi ukukwenza.
Ngisho noma ungenayo ingozi yokungabi nhlobo, ngeke ube khona okungadingekile ukufunda ukuthi ungamvimba kanjani ukuba angaboni esikhathini esizayo. Emaminithini angu-30-40 ngaphambi kokukhishwa kwesithwathwa, sebenzisa ukhilimu okhethekile wokuzivikela ebusweni nasezandleni, nasezindebe ezinomlomo ohlanzekile. Vele ungawenzi ngqo ngaphambi kokuphuma, ngaphandle kwalokho umphumela uzoba ngokuqondile ngokuphambene. Khumbula ukuthi nge-allergies ebandayo isikhumba ezindaweni ezingahlanganiswa nezingubo ezivame ukuhlupheka: ubuso, izindlebe, izandla. Ngakho-ke, isigqoko, amaglavu kanye namagundane yizimfanelo ezigunyaziwe zekhabethe lebusika. Gqoka njalo esimweni sezulu. Umuntu ovuthiwe noma othunyayo kunzima kakhulu ukumelana nezifo.
Ukuze uvimbele ukubuyela emuva kwemizimba ebandayo, sebenzisa indlela endala eqinisekisiwe - qala ukuqina. Ukusula, ukuguquka ngokunciphisa kancane kancane ekushiseni kwamanzi (kusuka ku-20-25 kuya ku-10-15g) yisisombululo esihle kunazo zonke hhayi kuphela ngenxa yezifo ezibandayo, kodwa kuzo zonke izifo!
Ama-markmark zokuzalwa avela kanjani nokuthi angawavikela kanjani?
Izifo ezingokwemvelo zesifuba
Kulimaza futhi kuzuze ugwayi kagesi
Ukulinganisa kwama-Hormonal wesifazane
Izakhiwo zokwelashwa nemilingo ye-obsidian
Izakhiwo zamafutha ahlukahlukene ahlukahlukene
Kungani indoda ingafuni ukukhula?
Amaqanda othosiwe ngesi-Spanish
Indlela yokuvimbela ukudweba kwezinwele
Ukugcina izinwele ezimhlophe nge-henna nekhofi
Home Spa - zokupheka eziningana
Izinyawo ezinamahloni zilimaza imilenze yakho
Ukupheka kwamasoso omnandi
Isimangaliso esiphundu okusajingijolo: okumnandi nokunambitheka okusajingijolo soufflé
Iyini indima ye-intuition ekwenzeni izinqumo?
Indlela yokugeza inkino kusuka izingubo
Isaladi nge-strawberry kanye nekhukhamba
I-compote yezithelo ezomile - iresiphi yesiphuzo esihle
Izici zengqondo zokukhulisa izingane emndenini